Kule minyaka ilishumi, bendisenza ngokwam iipapasho zesiko kunye nokupapashwa, ndilungisa kwaye ndiyila imixholo yesiko, kwaye ndisebenzisa iWindowsPress kubaxhasi. Ibe coaster roller kwaye ndinezimvo eziqinisekileyo kakhulu malunga nokuphumeza endikwenzileyo kwiinkampani ezinkulu nezincinci.
Ndiye ndagxeka abakhi -Iiplagi kunye nemixholo evumela uhlengahlengiso olungathintelwanga kwiindawo. Bakhohlisile, bahlala bethambisa kakhulu ubungakanani bephepha lewebhu ngelixa bethoba isiza ngokubonakalayo. Uninzi lomsebenzi esiwenzayo xa sithatha umsebenzi wophuhliso lwewebhu kubathengi sisusa ikhowudi yokuthengisa kunye ne-in-line engagcini nje ngokunciphisa isiza kodwa ikwathintela ngokungqongqo ukubanakho kwenkampani ukwenza utshintsho kwindawo yabo.
Umxholo Fusion wakhe ngokunyanisekileyo owona mxholo ungcono kunye nokudityaniswa kweplagi endikhe ndasebenza kunye nabo # 1 yokuthengisa umxholo ngalo lonke ixesha, Avada. Yenziwe ngokunyaniseka kakuhle kangangokuba ndiyiphumeza kwindawo nganye nganye kunye nakumthengi ngamnye. Nganye yezinto zokwakha zivumela ulwenziwo oluncinci- into oyifunayo ngokwenene ukuyitshixela phantsi ukunqanda umxhasi okanye umhleli ogqithisileyo ukwenza uphawu lophawu lwendawo kunye nokwazisa iingxaki ezifuna umsebenzi ongaphezulu wokuzilungisa.
Baye bagcina umxholo ohlukileyo kwi-plugin, okwenza ukuba umntu akwazi ukufaka umxholo omtsha-ngelixa egcina ukwenziwa kwesiko ngokusebenza kweseti yeeplagi. Inkqubo ye- Umxholo we-Avada intle, iphucukile, kwaye kulula ukusebenzela kuyo. Joyina ngaphezulu kwe-380,000 yabathengi abonelisekileyo ekuthengeni le mxholo umangalisayo!
yethu DK New Media Indawo ikwiAvada
Oko ndakha indawo yokuqala yeAvada, bendisebenzisa lo mxholo kubo bonke abathengi bethu. Kwaye, ekugqibeleni ndayihlaziya eyethu DK New Media indawo ngokunjalo. Jonga indlela entle ngayo-kwaye kwakulula kakhulu ukwakha ngelixa uphendula ngokupheleleyo.
Ubeko olukhoyo ngalo mxholo alunasiphelo, kunye namakhulu ezinto kunye namandla okwenza ukuba kube liphupha lokuphumeza. Ndithanda ngokukodwa ukuba ndingagcina izikhongozeli kunye nezinto zokuphinda zisetyenziswe kwihlabathi liphela kwamanye amaphepha ndisebenzisa iFusion Builder. Yinkqubo yokwakha iphepha egqibeleleyo evelisa ubeko oluqhutywa ziifayile zeCSS ngaphakathi kwesiza kunokufaka umgca kwimigca yamaphepha.